OWASP uye OSINT: Zvimwe pamusoro peCybersecurity, Kuvanzika uye Kusazivikanwa | Kubva kuLinux
Nhasi, isu tichaenderera mberi nezvinyorwa zvedu zvine chekuita nemusoro wenyaya IT Kuchengetedza (Kuchengeteka, Kuvanzika uye kusazivikanwa) uye kwavari isu isu ticha tarisa pane OWASP y OSINT.
Kunyange, OWASP chirongwa chakavhurika sosi chakatsaurirwa kusarudza nekurwisa zvikonzero zvinoita kuti software isachengeteka. OSINT seti yehunyanzvi uye maturusi anoshandiswa kuunganidza ruzivo rweveruzhinji, kuenzanisa data uye kurigadzirisa, kuitira kuti uwane ruzivo rwakakosha uye runoshanda kune zvimwe zvinangwa kana nzvimbo.
Ruzivo Kuchengetedzwa: Nhoroondo, terminology uye Munda weAction
Tisati tapinda mumusoro we OWASP y OSINTSemagariro, tinokurudzira mushure mekuverenga bhuku iri, ongorora zvirimo mune zvimwe zvinyorwa zvedu zvekare zvine chekuita nemusoro wenyaya IT Kuchengetedza.
... , Sosaiti, Hurumende), yechipiri inongotarisa kuchengetedza iyo data mukati mekomputa senge yakadaro. Ruzivo Kuchengetedzwa: Nhoroondo, terminology uye Munda weAction
Kuchengeteka, Mahara Software uye GNU / Linux: Iyo Yakakwana Triad
Computer Yakavanzika uye Yemahara Software: Kuvandudza kuchengetedzeka kwedu
Mahara uye epamhepo matekinoroji kubva pakuona kweRuzivo Kuchengetedzwa
1 OWASP uye OSINT: Masangano, Mapurojekiti uye Zvishandiso
1.1 Chii chinonzi OWASP?
1.1.1 OWASP mapurojekiti
1.2 Chii chinonzi OSINT?
1.2.1 Chii chinonzi OSINT Sisitimu?
OWASP uye OSINT: Masangano, Mapurojekiti uye Zvishandiso
Chii chinonzi OWASP?
Zvinoenderana newebsite yepamutemo ye OWASP es:
"Open Open Web Application Security Project (OWASP) inotungamirwa nenheyo isingabatsiri yezita rimwe chete iro rinoshanda kugadzirisa software kuchengetedza. Uye vane chimiro chinosanganisira kuvandudzwa kwenzvimbo-inotungamirwa yakavhurwa sosi software mapurojekiti. Said Foundation parizvino ine zvinopfuura mazana maviri zvitsauko zvemuno kutenderera pasirese, makumi ezviuru emitezo uye inoitisa inotungamira misangano yekudzidzisa uye yekudzidzisa muchikamu ichi."
Nekudaro, zviri pachena kuti iyo chinangwa of the OWASP Nheyo es:
"Kuve nharaunda yakavhurika yakatsaurirwa kumasangano anobvumidza kubata pamuviri, kusimudzira, kuwana, kushanda uye kuchengetedza zviitwa zvinogona kuvimbwa nazvo. Uye kwavari, avo ese mapurojekiti, maturusi, zvinyorwa, maforamu uye zvitsauko zvakagadzirwa zvakasununguka uye zvakavhurika kune chero munhu anofarira kugadzirisa kunyorera kuchengetedzwa."
Zvose Software Zvirongwa uye Zvishandiso yakagadzirwa na OWASP inogona kutaridzwa mune yako Zvirongwa Chikamu, uye zvakare pawebhusaiti yavo yepamutemo ku GitHub. Uye pakati pezvakanakisa kuzivikanwa tinogona kutaura zvinotevera:
OWASP Wepamusoro 10: Purojekiti ine yakajairwa gwaro rekuziva revashandisi vekushandisa webhu uye chengetedzo. Uye izvo zvinomiririra kubvumirana kwakazara pamusoro penjodzi dzakakomba dzekuchengetedza kwavari.
Webhu Chengetedzo Yekuyedza Gwara (WSTG): Purojekiti ine Webhu Yekuedza Yekuongorora Yekutsvagisa iyo inogadzira iyo yekutanga cybersecurity kuyedza sosi yevanogadzira webhu vanogadzira uye vekuchengetedza nyanzvi. Naizvozvo, iri rakanakisa uye rakazara gwara rekuyedza webhu uye chengetedzo yekushandisa, sezvo ichipa hwaro hweakanakisa maitiro anoshandiswa nevano pinda vanoongorora uye nemasangano kutenderera pasirese. Iko kune zvekare imwe yekushandisa mobile.
Chii chinonzi OSINT?
Kubvira OSINT Izvo, sezvatakambotaura pakutanga: "seti yetekinoroji uye maturusi anoshandiswa kuunganidza ruzivo rweveruzhinji, kuenzanisa data uye kurigadzirisa, kuti uwane ruzivo rwakakosha uye runoshanda rwezvimwe zvinangwa kana nzvimbo"; zvimwe chete haina webhusaiti yepamutemo. Nekudaro, kune akati wandei mawebhusaiti anopa akawanda anobatsira ruzivo uye zvishandiso zveOSINT. Izvo zvinogona kushandiswa zvese kuongorora nekurwisa chinhu chakanangwa, kana kuti chero munhu atore matanho akakodzera ekudzivirira kurwiswa kwakadai.
Izvo zvakakosha kujekesa nezve OSINT inotevera:
"Izwi rekuti "rakavhurika sosi" mukati meOSINT harirevi kune Open Source software kufamba, kunyangwe akawanda OSINT maturusi ari Open Source; asi, inotsanangura iyo yeruzhinji iyo data iri kuongororwa."
Chii chinonzi OSINT Sisitimu?
Pakati pemawebhusaiti ane hukama ne OSINT tinogona kutaura OSINT Sisitimu. Inogona kutsanangurwa se:
An online repository iyo inosanganisira nhamba hombe yezvishandiso (zvishandiso, webhu masevhisi) kuita tsvakiridzo mune yakavhurika ruzivo masosi. Inoshanda sefaira rinochengeta uye rinoronga maturusi anoshandiswa mukuferefetwa kweOSINT Aya maturusi zvakare akaiswa emaraibhurari erudzi rweGPLv3 (yemahara uye yakavhurwa sosi), iyo inobvumidza kuunganidza marudzi ese e data (ruzivo) kuitira kuferefetwa kunodiwa. Zvikurukuru, maturusi aya anogona kutsvaga uye kuunganidza data, senge, Mazita evashandisi, maE-mail kero, IP kero, Multimedia zviwanikwa, Maprofayiri munzvimbo dzekudyidzana, Geolocation, pakati pevamwe vazhinji.
Kune avo, vanofarira kuda kuziva zvakawanda nezve OSINT unogona kushanyira yako yepamutemo webhusaiti paGitHub kana chinotevera link.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «OWASP y OSINT», 2 misoro inonakidza inofukidza masangano, mapurojekiti, zvishandiso, uye zvimwe zvakawanda, mukufarira yakasimba uye yakajeka IT Kuchengetedza (Kuchengeteka, Kuvanzika uye Kuzivikanwa); ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » dzakawanda » OWASP uye OSINT: Zvimwe pamusoro peCybersecurity, zvakavanzika uye kusazivikanwa
Iyo itsva vhezheni yeAudacious 4.1 yaburitswa